Qiso “ Neefkan waa bilaashe ee Iska qaado” - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Qiso “ Neefkan waa bilaashe ee Iska qaado”
Qiso “ Neefkan waa bilaashe ee Iska qaado”
Waxay ahayd maalmahii ciida waxaana uu usoo iibiyay qoyskiisa neef ay qashaan, laakiin nin ay saaxiib ahaayeen ayuu u soo dhibay si u gurigiisa u geeyo. Ninkaasi ayaa neefkii geeyay guri ku xiga oo qoys caruur agoon ah kuwaasi oo aad ugu farxay waxayna hooyadu qoysku u qaadatay inay keeneen hay’adaha samafalku.
Markii aabuhu guri yimid wuxu markiiba waydiiyay neefkii waxayna hooyadu ugu jawabtay in aanay arag, laakiin laga yaabo guriga ku xiga in la geeyay oo neef joogay. Aabaha waa sax u daaya mid kale ayaan soo iibine.
Markii uu sayladda tegay ayuu neef iibsaday aad u wanaagsan oo kaba wanagsan kiisii hore, xulashadiisa ka dib wuxu weydiiyay ninkii watay lacagta uu bixinayo, laakiin waxa loogu jawaabay adhigan anigaa keenay waxaan aan hore nidar u galay in aanan qofka ugu horeeya ka qaadin lacag ee aan bilaash u siiyo sidaas darted kaxayso mana bixinaysid lacag si u nidarkaygu u fulo. Markaad niyad wanaagsan wax u bixiso Aallah bedelkeeda ku siinayaa.
Previous articleMaalmo Ka mid ah Noloshii Rasuulka
Next articleGeeridu Wakhtigeeda Ma Dhaafto